"Fa fahasoavana no namonjena anareo amin’ny finoana; ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin’Andriamanitra." Efesiana 2:8
“Ireo raiko, reniko, raibeko sy renibeko dia nanaraka ny fivavahana “mormona”, ary nanabe ahy mba hanjary “mormona” tsara, mandray andraikitra sy tsy mivadika. Nampianarina ahy fa eto amin’ity fiainana ity dia vidina avokoa ny zavatra rehetra, izay mendrika no mahazo, misy takalony ny zavatra rehetra, mitaky ezaka ny fahazoan-javatra… ary tahaka izany koa amin’ny fiainana ho avy. Tsy maintsy miezaka mba hahazo ny toeranao eo akaikin’Andriamanitra, mba ho mendrika ny fiainana mandrakizay amin’ny fanaovana asa soa voafaritra mazava tsara. Saingy tsy nahalala an’Andriamanitra aho, ary tsy nanana antoka momba ny hoaviko mandrakizay.
Indray andro ny renibeko dia nihaino fandaharana tao amin’ny fampielezam-peo, nanazava ny Filazantsara amin’ny antsipiriany. Tonga saina izy fa na dia mpivavaka aza, dia tsy afaka namafa fahotany iray akory teo anatrehan’Andriamanitra. Ny sorona nataon’i Jesosy, Izay maty teo amin’ny hazofijaliana noho ny fitiavany ny mpanota, izany ihany no afaka mamonjy azy. Koa tamin’izay izy dia nandray ny fiadanam-po, nandray ny antoka fa voavela heloka tanteraka sy manana fiainana mandrakizay, nanaiky ny fahasoavana lavorary avy amin’Andriamanitra. Saingy tsy naharesy lahatra an’iza na iza ny fijoroany ho vavolombelona.
Rehefa roa ambin’ny folo taona aho, dia nilaza tamin’ireo ray aman-dreniko izy fa hiantoka ahy hilasy miaraka amin’andian-tanora tarihina kristiana. Nisokatra ny foko rehefa natorona mpiandraikitra iray ahy ilay andininy ao amin’ny Baiboly hoe: “Fahafatesana no tambin’ny ota; ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin’Andriamanitra ao amin’i Kristy Jesosy Tompontsika” (Romana 6:23). Takatro tamin’izany fa tsy mahonitra ny fahotako ireo asa soa sy ezaka nataoko, ary maty ho ahy Jesosy. Rehefa nino Azy aho dia nandray famelan-keloka sy fiainana mandrakizay. Efapolo taona mahery izao no nahafantarako izany; voavonjy aho, noho ny fahasoavan’Andriamanitra.”